﻿	Creamy dil nduku Salad - Ezi Ntụziaka
esi esi nri esi na stovu
ogologo oge obụpde ọkụkọ soseji
ogologo oge ole ka parboil green peppers
salad na tomato letus na kukumba
Creamy dil nduku Salad
Nduku salad bu otu n’ime nri nri onye obula huru n’anya. Ọ dị mfe ịme tupu oge eruo ma nwee ike ịnwe ọtụtụ mgbakwunye dị iche iche (dịka anụ ezi na chiiz )!
-esi mee ka grits na mmiri ara ehi
Nke a bụ otu n'ime ọkacha mmasị m nduku salad Ezi ntụziaka niile oge! Ọ bara ọgaranya na ude mmiri ma jupụta na dill ọhụrụ. M hụrụ n'anya ụtọ nke ọhụrụ dil fresh ya naanị mkpu SUMMER m !! Akụkụ zuru oke maka BBQ ma ọ bụ picnic!
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị mebere salad nduku, uzommeputa a dị mfe ịmegharị! You nwere ike dochie 2/3 nke mayo na yogọt Greek ọ dịkwa ụtọ! (Onweghị onye ga-ama!). M n'ezie dochie yogọt Greek maka akụkụ nke Mayo n'ime ọtụtụ creamy Ezi ntụziaka na ọ na-arụ ọrụ zuru oke! M na-amalite site n’ihe dị ka 2/3 mayo ruo 1/3 yogọt ma mee nhazi site n’ebe ahụ!
Gbanyụọ AKW SKWỌ SATAD SATAD
esi anụ uhie nduku na imi ihe
Nri akwukwo nri ndi ozo
gịnị bụ salad a na-ewu ewu nke letus a na-akpọ?
4,96site nairi isevotu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nriiri na ise Nkeji Oge zuru ezu35 Nkeji Ọrụ10 servings Onye edemedeHolly NilssonSalad a nduku na ekpomeekpo ndaeyo nke dill bụ akụkụ zuru oke maka nzukọ ọ bụla! Bipute Ntụtụ
▢3 paụnd nduku acha ọcha ma ọ bụ ọbara ọbara
▢1 ½ iko celery okpokoro
▢3 tablespoons yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ finely ịkpụ
▢¾ iko Mayonezi Ana m eji Lightman's Light
▢½ iko kriim gbara ụka
▢abụọ tablespoons ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
▢4 tablespoons ohuru ohuru mebiri
Obụpde poteto ruo mgbe ị ga-adị nro (ihe dịka nkeji 15-20). Jụụ na bee n'ime aru sized iberibe.
N'ime nnukwu efere, gwakọta ihe niile ma e wezụga poteto.
Ikpokọta mma nduku na dil ngwakọta na refrjiraeto dịkarịa ala otu awa.
Calorisị:Ogbe 162,Carbohydrates:24g,Protein:3g,Abụba:6g,Abụba Ajuju:1g,Cholesterol:8mg,Sodium:Ogbe 188mg,Potassium:Ogbe 684mg,Eriri:abụọg,Sugar:3g,Vitamin A:190IU,Vitamin C:13.9mg,Calcium:35mg,Iron:1.1mg
Isiokwudil nduku salad N'ezieSide efere Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .